DEG-DEG: PSG Oo Heshiis Laba Sannadood Ah La Gashay Sergio Ramos & Magacyada LABA Kooxood Oo Ingiriis Ah Oo Ay Ka Hor Qaaday - Laacib
HomeWararka Ciyaaraha MaantaDEG-DEG: PSG Oo Heshiis Laba Sannadood Ah La Gashay Sergio Ramos & Magacyada LABA Kooxood Oo Ingiriis Ah Oo Ay Ka Hor Qaaday
DEG-DEG: PSG Oo Heshiis Laba Sannadood Ah La Gashay Sergio Ramos & Magacyada LABA Kooxood Oo Ingiriis Ah Oo Ay Ka Hor Qaaday
July 1, 2021 Abdiwahab Ahmed Wararka Ciyaaraha Maanta, Suuqa Kala Iibsiga 0
Kooxda kubadda cagta PSG ayaa heshiis laba sannadood ah la gashay difaaca reer Spain ee Sergio Ramos oo si xor ah ugu biiraya, kaddib markii uu ka tegay Real Madrid xagaagan.
Sergio Ramos ayaa maanta gellinkii dambe gaadhay magaalada Paris iyadoo uu wehelinayo walaalkii oo ah wakiilkiisa, waxaana markiiba ay dhamaystireen waxyaabo yaryar oo ka dhinnaa heshiiska uu ugu wareegayo PSG.
Wariyaha warbaahinta RMC ee Mohamed Bouhafsi ayaa mar dhoweyd shaaciyey, in Sergio Ramos uu heshiis laba sannadood ah la gaadhay PSG, isla markaana la dhamaystiray wax walba. Qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitterka, ayuu Mohamed Bouhafsi ku yidhi: “Heshiis ayay gaadheen PSG iyo Sergio Ramos. Halyeyga Real ayaa heshiis laba sannadood ah ugu biiraya PSG.
“Ciyaartoyga walaalkii oo ku sugan Paris ayaa heshiiska la gaadhay maamulka kooxda Paris. Tijaabada caafimaadka ayuu mari doonaa maalmaha yar ee soo socda.”
Mohamed Bouhafsi ayaa sidoo kale sheegay laba kooxood oo Ingiriis ah oo doonayay saxeexa difaacan oo ay PSG kaga guuleysatay, kaddib markii uu Sergio Ramos iska diiday.
Saxafiga ayaa qoraal kale oo uu bartiisa Twitterka ku daabacay ku yidhi: “Halyeyga Madrid wuxuu iska diiday dalabyo uga yimid laba kooxood oo Ingiriis ah, kuwaas oo midkood siinaysay lacag ka badan inta PSG. Walaalkii ayaa maanta joogay PSG si uu u dhamaystiro imaatinka ciyaartoyga.”
Inkasta oo aanu Mohamed Bouhafsi shaacin labada kooxood ee Ingiriiska ah ee doonayay Ramos, haddana warbaahinta ayaa sheegaysa in ay yihiin Manchester United iyo Manchester City.
Wariyaha kale ee caanka ah ee Fabrizio Romano ayaa isaguna xaqiijiyey in Ramos uu heshiis u saxeexayo kooxda tababare Mauricio Pochettino.
PSG ayaa doonaysa in ay ka faa’iidaysato khibradda Sergio Ramos, si ay ugu guuleysan karto tartanka Champions League xilli ciyaareedka 2021/22 ama midka xiga, inta uu jiro heshiiska labada sannadood ah ee Sergio Ramos.